Culture week launch beckons - DailyNews Live
Culture week launch beckons
ENTERTAINMENT WRITER • 11 May 2017 8:50AM • 0 comments
HARARE - The 2017 Culture Week commemorations, which will run throughout Zimbabwe from May 20 to 26, will be officially launched at Nyava High School in Musana, Bindura Rural.
According to National Arts Council of Zimbabwe (Nacz) spokesperson, Cathrine Mthombeni, the national launch of the event will feature various cultural activities.
“The official Culture Week launch is a national event coordinated by Nacz and implemented by the hosting province in which this year it is Mashonaland Central.
“Culture is identity and culture in its diversified format fosters co-existence, harmony and peace. Zimbabwe as a cultured nation is proud of its national identity. In Zimbabwe, chiefs play a pivotal role in the safeguarding, preservation and promotion of cultural norms and practices that inform the nation’s spirit of Ubuntu/Unhu,” said the Nacz spokesperson.